It is me. Ko Niknayman.: 2008
Posted by အာဇာနည် at 11:15 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 9:35 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 8:14 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 8:12 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 9:53 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 9:34 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 9:18 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 2:54 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 2:49 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 8:25 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 10:30 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 9:31 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 10:39 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 10:25 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 1:19 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 6:56 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 2:30 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 11:07 PM Links to this post
Posted by Niknayman at 2:11 PM Links to this post
ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း အိုကီနာဝါကျွန်းရှိ ကျောင်းတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့
နှစ်နှစ်သားအရွယ် ကိုနန် (Conan) ခွေးလိမ္မာလေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုင်းရှိုင်းစွာနဲ့ရှိခိုးကန်တော့တာတွေ့ ရတော့ အဟိတိရစ္ဆာန်ခွေးတောင် ဘာသာတရားနဲ့ နီးစပ်တဲ့အခါမှာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ် လုပ်တာတွေ့ ရတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘုရားမှန်းမသိ၊ တရားမှန်းမသိ၊ သံဃာမှန်းမသိတဲ့မိစ္ဆာဒိဌိတွေ ခွေးလောက်တောင် အသိတရားမရှိကြ၊ သံဃာကိုရိုက်သတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဖျက်စီး ဘုရားဆင်းတုတော်တောင် ခေါင်းပြတ်စေတဲ့ မိုက်ရိုင်းမှုတွေကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး၊ ဒီလို မိစ္ဆာဒိဌိတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးနေကြဦးမှာလားဆိုတာ လူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်မေးကြစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Niknayman at 11:39 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 5:52 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 3:49 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 1:39 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 1:31 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 6:01 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 1:48 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 12:38 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 9:44 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 5:35 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 2:45 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 2:19 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 10:59 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 10:47 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 10:23 PM Links to this post
ကျင်ကြီးစွန့်ချင်စွန့် ကျင်ငယ်တော့မစွန့်နဲ့ ( ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၁)
Posted by အာဇာနည် at 5:32 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 4:07 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 1:34 AM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 8:40 PM Links to this post
Posted by အာဇာနည် at 3:42 PM Links to this post